Kitra – «Can 2019»: mbola vonona hanome fandresena ho an’ny mpijery ny Barea | NewsMada
Kitra – «Can 2019»: mbola vonona hanome fandresena ho an’ny mpijery ny Barea
Hitana ny sain’ny rehetra, amin’ity faran’ny herinandro ity, ny lalao baolina kitra, hiadiana ny “Can 2019”. Hampiantrano an’i Soudan, amin’ity, ny Barea de Madagascar. Mbola vonona hanaporofo ny maha andrarezina azy ny ekipam-pirenena malagasy.
Hotanterahina, rahampitso eny amin’ny kianja Complexe Vontovorona, ny lalao hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy i Soudan. Fihaonana, tafiditra amin’ny andro fahadimy, fifanintsanana isam-bondrona, hiadian-toerana amin’ny “Can 2019”. Marina fa efa tafita any Kameronina ny Barea de Madagascar, saingy hanamafy ny toerana efa misy azy.
Lalao miverina eo amin’ny roa tonta ity hatao ity. Hanala vela amin’ny Barea ry zareo Sodaney, izay efa resin’ny Malagasy, tany amin’ny kianja filalaovany, tamin’ny isa mazava 3 no ho 1. Efa tsy manana herijika intsony ry zareo Sodaney fa lalao hiarovan-boninahitra fotsiny sisa hataony.
Nanambara i Faneva Ima, kapitenin’ny Barea de Madagascar, fa tsy manambany ity fihaonana amin’i Soudan ity mihitsy ry zalahy fa tena mandray izany ho fihaonana lehibe. Mbola vonona indray ry zalahy hanolotra fandresena ho an’ireo mpijery. Tsiahivina fa efa tonga eto an-toerana avokoa ireo mpilalao mpila ravinahitra avy any Frantsa sy avy any Thaillande ary avy any Egypta, nantsoin’i Nicolas Dupui, mpanazatra malagasy.
Izay mendrika no ho tafiditra
“18 ihany ny azo atao ao anaty lisitra, amin’io lalao io, noho izany, izay mendrika no tsy maintsy ho tafiditra ao anatin’izany. Tsy hijerena hoe mpila ravinahitra na avy eto an-toerana io satria ny voninahitr’i Madagasikara ny arovana”, hoy i Nicolas Dupuis.
Tetsy ankilany, efa tonga eto Madagasikara ny alakamisy lasa teo ny mpilalaon’i Soudan. Nilaza ry zalahy fa tsy hitsangantsangana ny hahatongavany eto Madagasikara fa tena hilalao ary vonona ny handresy ny Barea.
Efa nitsapa ny kianjan’i Vontovorona izy ireo, omaly zoma, ary mbola manohy ny fanomanan-tenany eo amin’izany fotodrafitrasa izany, amin’ity asabotsy ity.
Miantso ireo mpijery ho tonga marobe hanohana azy ireo hatramin’ny farany ireo mpilalaon’ny Barea. Miangavy ry zalahy mba tsy hiala aloha izy ireo fa hiandry ny kiririoka hatramin’ny farany, hiaraka hiaina ny fandresena homen’ireo mpilalao azy ireo, amin’ity fihaonana farany, atao eto Madagasikara, ity.
Tsiahivina fa ny lalao hikatrohana amin’ny Liona senegaley, ny volana marsa 2019, ny mamarana ny fifanintsanana, hiadian-toerana amin’ity “Can 2019” ity.